TS.1 At The Jetty
EXHIBITIONS , CREATIVE WORKSHOPS , PAST EVENTS , Press
TS1 isacreative concept project, founded by Ivan Pun in Yangon, Myanmar in 2013. Started as pop-up space for contemporary arts inatransitioning city, it has now widened its scope to include more than physical space for artistic expression. TS1 is nowafundraiser for the arts, with aim to encourage the art scene in cities throughout Myanmar and enable international exchanges with artists, curators and institutions. TS1’s platform also encourages the diversity of mediums, acting as an advisory body for the development of contemporary art in Myanmar –acultural catalyst for future generations of creative thinkers. Inacountry where there are no public art institutions, TS1 hopes to engage the public through the arts by collaborating with the numerous independent organizations throughout the country and the region.
Since 2013, TS1 collaborated with over 25 collectives, institutions, artists and organizations in order to enrich and encourage the art scene in Yangon. These include: JAMIT! an independent music, Myanmar-run organization; Contemporary Dialogues, events for artistic scholarship; Mobile Library Myanmar in cooperation with Asia Art Archive (AAA) and the Foundation for the Arts Initiative (FFAI); Beyond Pressure performance art festival and its founder Moe Satt; Goethe Institut Myanmar; Inya Art Gallery, Yangon’s oldest contemporary art gallery; NNCL Studio,avideo art and filmmaking studio in Myanmar; Dhaka Art Summit in Bangladesh; New Urban Topologies,aconference on art and architecture in developing cities, in cooperation with Fargfabriken (Stockholm); My Yangon My Home Art and Heritage Festival in collaboration with the British Embassy in Yangon; Yangon Photo Festival in cooperation with the French Institute; Pansodan Art Gallery and Archive; and the list continues.
Funding for TS1 projects are made possible by the generous support of its patrons, fundraising and grant applications from varied institutions, and the efforts of the artistic communities of Myanmar.
We are delighted to welcome you to the third edition of A Beast,agod andaline, curated by Cosmin Costinas and brought to Yangon by TS.1, an organization founded by Ivan Pun supporting the arts in Myanmar.
The exhibition will open at the Pyinsa Rasa Art Space in the Secretariat AND Myanm/art Gallery on6June 2018 at 10 am. We are thrilled to be bringing this, the largest international contemporary art exhibition ever to show in Myanmar.
Please join us on6June 2018 for this historic event.
a beastagod andaline
by Cosmin Costinas
A beast,agod, andaline was woven by connections and circulations of ideas acrossageography with Asia at its core. This geography is commonly called the Asia-Pacific, but it could also be defined by several other definitions, which this exhibition explored and untangled.
Western hegemony was challenged fromafundamentally different premise, that of unfinished processes of decolonisation and resurgent Indigenous identities, which were reflected both in the subject matter and in the aesthetic choices of several exhibited artists. Throughout the exhibition, artists investigated traces of colonial domination, as well as the different ramifications of that hegemony today, when cultural and environmental degradation continue to unravel landscapes, communities, and worlds.
These broad stories circulate across South and Southeast Asia on routes going back several historical eras, the first being the early Austronesian world that has wovenamaritime universe surpassed in scale only by European colonialism, from the Pacific to Madagascar, with Taiwan as its origin and Indonesia, Malaysia, and Philippines at its core – which was taken as the speculative and approximate geographical perimeter of this exhibition. These historical journeys also served as an introduction toamajor political reality that defines many contexts today and is often manipulated by the rising nationalist discourses.
Brang Li | Maung Day | Emily Phyo | Aung Myint | More to Come
Ampannee Satoh | Anand Patwardhan | Anida Yoeu Ali | Apichatpong Weerasethakul | Simon Soon (with RJ Camacho and Celestine Fadul)
Charles Lim Yi Yong | Cian Dayrit | Dilara Begum Jolly | Garima Gupta | Idas Losin | Ines Doujak | Nabil Ahmed | Jimmy Ong | Joël Andrianomearisoa | Joydeb Roaja | Lavanya Mani | Malala Andrialavidrazana | Ming Wong | Munem Wasif | Nontawat Numbenchapol | Norberto Roldan | Paul Pfeiffer |
| Sarat Mala Chakma | Sawangwongse Yawnghwe | Sheela Gowda | Sheelasha Rajbhandari | Simryn Gill | Su Yu Hsien | Taloi Havini Than Sok | Trevor Yeung
Truong Công Tùng | Tuguldur Yondonjamts | Zamthingla Rivah
တောကောင်တစ်ကောင်၊ နတ်ဘုရားတစ်ပါး၊ မျဉ်းကြောင်းတစ်ကြောင်း
လက်ရာများကိုရွေးချယ်စုစည်းတင်ဆက်သူ – ကော့စမင်န် ကော့စတီးနာ့စ်
Samdani Art Foundation, Para/Site နှင့် MOMA Warsaw
ရန်ကုန်တွင်ပွဲတင်ဆက်သူ – TS.1
ပြပွဲကာလ – ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့မှ ၂၂ ရက်နေ့အထိ
နေရာ – ပဉ္စရသ အနုပညာပြခန်း၊ ရန်ကုန်အတွင်းဝန်များရုံး
ရေးသားသူ – ကော့စမင်န် ကော့စတီးနာ့စ်
တောကောင်တစ်ကောင်၊ နတ်ဘုရားတစ်ပါး၊ မျဉ်းကြောင်းတစ်ကြောင်း ဆိုတဲ့ပုံကားချပ်ကို ရက်ယှယ်ပြုလုပ်ရာမှာ အာရှကိုဗဟိုမှာထားရှိပြီး ပထ၀ီအနေအထားတခုအတွင်းက ဆက်နွယ်မှုတွေ၊ စိတ်ကူးဖြန့်ဝေကူးလူးမှူတွေကို အခြေခံကာ ရက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းပထ၀ီအနေအထားကို အာရှ-ပစိဖိတ်လို့ လူသိများပါတယ်။ အခြားအဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်တွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီပြပွဲကိုယ်တိုင်ကလည်း ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်တွေကို စူးစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့၊ ဖျဉ်ထုတ်ယူဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
အနောက်ကမ္ဘာရဲ့ ဗိုလ်ကျကြီးစိုးမှုကို စိန်ခေါ်တဲ့နေရာမှာ အခြေခံအားဖြင့်မတူညီတဲ့ အနေအထားတွေကနေ စိန်ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ယခုတိုင်မပြီးဆုံးနိုင်သေးတဲ့ ကိုလိုနီဘ၀ကနေ လွတ်မြောက်အောင်အားထုတ်မှုဖြစ်စဉ်တွေ၊ ဌာနေတိင်းရင်းသားအမှတ်လက္ခဏာတွေကို နိုးကြားရှင်သန်လာအောင်ပြုလုပ်တာတွေ စတဲ့ အနေအထားတွေဖြစ်ပါတယ် ဒီအနေအထားတွေဟာ ယခုပြပွဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အနုပညာရှင်အချို့အတွက် အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်သလို၊ ရသလမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုလည်းဖြစ်တယ်။ ပြပွဲတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း အနုပညာရှင်တွေဟာ ကိုလိုနီပြုကျင့်ဗိုလ်ကျခြင်းရဲ့ လက်စလက်နတွေကို ဆန်းစစ်လေ့လာတာမျိုး၊ အဆိုပါဗိုလ်ကျစိုးမိုးမှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကို စူးစမ်းတမျိုးတွေ ပြုလုပ်ထားကြပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့ရဲ့ ယုတ်လျော့ပျက်စီးခြင်းဟာ ရှူမျှော်ခင်းတွေ၊ ရပ်ရွာတွေ၊ လောကနယ်ပယ်တွေကို ပြိုကွဲပျက်စီးအောင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကိုလည်း လေ့လာဖော်ထုတ်ထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရမယ်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်ဇာတ်လမ်းတွေဟာ တောင်အာရှနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှဒေသတို့မှာ ဟိုးရှေးယခင် ခေတ်အဆက်ဆက်မှာကတည်းက တည်ရှိနေ၊ ၀ဲလှည့်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ သမိုင်းမှာ အစောဆုံးဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ သြစထရိုနေရှန်းနယ်နမိတ်ပေ့ါ။ အဲဒီရေကြောင်းနယ်နမိတ်ဟာ ပစိဖိတ်ကနေ မာဒါဂတ်စကာအထိပါဝင်ပြီး ထိုင်ဝမ်မှာအစတည်ပါတယ်။ ထို့အတူ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှားနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ကို နယ်နမိတ်ရဲ့ ဗဟိုချက်မှာထားရှိပါတယ်။ အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ အဆိုပါရေကြောင်းနယ်နမိတ်ဟာ ရေကြောင်းစကြ၀ဠာတစ်ခုလိုဖြစ်ပြီး သူ့ထက်အရွယ်အစားကြီးတာဆိုလို့ ဥရောပကိုလိုနီအင်ပါယာပဲရှိပါတယ်။ အခုပြောသွားတဲ့ရေကြောင်းနယ်နမိတ်ဟာ ယခုပြပွဲရဲ့ ပထ၀ီနယ်နမိတ်လည်းဖြစ်တယ်။ အခုဆွေးနွေးသွားတဲ့ သမိုင်းခရီးစဉ်တွေဟာ ကနေ့ခေတ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအရှိတရားကို ပုံဖော်တာဖြစ်ပြီး၊ ကနေ့ခေတ်မှာ အပြိုင်းအရိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒပို့ချချက်တွေ၊ အယူအဆတွေကဆိုတာကလည်း အဆိုပါကိုလိုနီသမိုင်းကို အမြတ်ထုတ်သုံးစွဲပြီး လူတွေကို စည်းရုံးပို့ချတာဖြစ်တယ်။
အထက်မှာပြောခဲ့သလို နိုင်ငံရေးအရ၊ အယူဝါဒရေးရာအရ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်အတွင်းမှာ ဘုံတူညီမှူတစ်ရ့်ကို ဘယ်လိုညှိနှိုင်းရှာဖွေယူနိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဒီပြပွဲကမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ပြိုင်အနုပညာရဲ့ အယူဝါဒအခြေခံကိစ္စတွေကို မေးခွန်းထုတ်ကြရင်းနဲ့ပဲ ခေတ်ပြိုင်အနုပညာရဲ့ ရသအခြေခံတစ်ခုကို ဘယ်လိုဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းမလဲဆိုတာက နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မတူညီကြရုံသာမက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုဖီလာဆန့်ကျင်တဲ့ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်အလိုက်ဖြစ်စဉ်တွေဟာ ပြပွဲနေရာတစ်ခုတည်းမှာ ဘယ်လိုနေရာယူကြမလဲ။ ပြပွဲရဲ့ မတူညီတဲ့ကဏ္ဏတွေမှာ အခိုင်အမာမဟုတ်ပေမယ့် ပြပွဲတစ်ခုလုံးကိုတွဲသီထားတာကတော့ အထည်အလိပ်လက်ရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှူအခြေခံမတူညီကြပေမယ့် အထည်အလိပ်ဆိုတာကတော့ တူညီတဲ့ ဘုံဘာသာစကား၊ တူညီတဲ့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ အထည်အလိပ်လက်ရာတွေဟာ အပြိုင်ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်မှုတွေကို လေ့လာနိုင်တဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင်သီးခြားအနေအထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာရှင်တစ်ဦးချင်းရဲ့ ပါဝင်စွက်ဖက်မှုကင်းပတဲ့ အနေအထားမျိုးပါ။
ဒီပြပွဲမှာပါဝင်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှူပုံစံတွေမှာ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံသော သမိုင်းနောက်ခံ၊ ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံနဲ့ ပထ၀ီနောက်ခံအနေအထားတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘေးဖယ်ထုတ်ခံထားရတယ်လို့ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို ရှာဖွေမယ်၊ မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မျိုးအပေါ် အခြေခံမထားပါဘူး မည်သို့ပင်ဆိုစေ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်နေပြီး၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိတဲ့ အနုပညာနယ်ပယ်တစ်ခုကို အခြေခံကာ ဒီပြပွဲကို တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။